I-Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) - isikole soLimi lwe-BLI eCanada
Uhlelo Lwezilimi Ezimbili
Abantu abadala nabadala abasebasha
Ukulungiselela ukuhlolwa kwe-TEFAQ
Uhlelo Lwesisekelo & Oluphezulu
I-Toronto Film School
I-Prince Edward Island
Inyuvesi yasePrince Edward Island (UPEI)
ISaint Michael's College University
IManhattan Institute of Management (MIM)
I-TEF Canada ne-TEFAQ
Indawo yokuhlala yabafundi
Indawo yokuhlala ehlukile
Usuku lokuqala lwamakilasi
Ngemuva kwemisebenzi yeSikole
FLAP | Ikamu lasehlobo
Inkambu yolimi eku-inthanethi
Izinhlelo zePathwayIkhomishini Scolaire Marguerite-Borgeoys (CSMB)
Indlela yakho eya eCanadaIkhomishini Scolaire Marguerite-Borgeoys (CSMB)
ICommission Scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) inethiwekhi yesibili ngobukhulu eQuebec enabafundi abangaphezu kwama-75,000, abangama-48,000 babo abasezikoleni zamabanga aphansi naphezulu, ezikoleni eziyi-102 (izikole ezingama-75, izikole eziphakeme eziyi-14, izikole ezikhethekile ezi-3, eziyisithupha izikhungo zokuqeqeshelwa umsebenzi kanye nezikhungo ezi-6 zemfundo yabantu abadala). I-CSMB ingelinye lamabhodi ezikole amahlanu esiqhingini saseMontreal (Quebec, Canada). Iphethwe ngumkhandlu wabakhomishani abayi-4 kanye nomongameli okhethwe yi-universal suffrage, kanye nangokhomishani abane abamele abazali. Abokugcina baqokwa yiKomiti Elikhulu Labazali; isikhathi sabo sokuba sehhovisi unyaka owodwa. UDiane Lamarche-Venne ungumongameli wamanje we-CSMB.
Ikhomishini Scolaire Marguerite-Borgeoys (CSMB)Olunye ulwazi
Kuya ngohlelo, sicela uxhumane nomnyango wethu wePathway University.
Isikhathi Sokugcina Isicelo
3 izinyanga ngaphambi
I-BLI French Level 8 ne-Entrance Test
Uma udinga indawo yokuhlala ngesikhathi uthatha uhlelo lwakho sicela uthinte umnyango wethu wezindlu.
Uhlelo olunikelwe ngaphakathi
Funda ukuhweba ngomshini akusho ukuthi ungatshali imali kuphela esikhathini esizayo, kodwa futhi nesipiliyoni esizuzisayo.
Leli bhizinisi livela ngokushesha ngobuchwepheshe obusha bama-computer kanye nemvelo. Uzofundela lobu buchwepheshe obusha ukuthola kanye nokulungisa zombili izinto ezisebenza ngemishini nezikagesi. Uzofunda futhi ukubamba iqhaza kuzo zonke izinhlaka zokulungisa nokugcina imoto.
Isikhathi Esithathwayo: Izinyanga eziyi-16 zokuqeqeshwa kanye ne-internship
Umsebenzi wokuthatha izithombe uphelele kulabo abafuna ukuzichaza futhi bakhombise ubuhlakani babo. Eminyakeni yobudala bezithombe zedijithali, othisha abanolwazi baqeqesha abantu abasebenza kahle abazosebenzela bona noma njengengxenye yeqembu lokudala ezinkampanini ezizimele.
Abathweswe iziqu basebenza emikhakheni ehlukene ehlonishwayo kufaka phakathi imfashini, ukukhangisa, ubuntatheli, izithombe zezimboni, njll.
Isikhathi Esikhona: Cishe izinyanga eziyi-16 (amahora ayi-1,800)
UKUFAKWA KANYE NOKUQHUTYWA KOKUFUNA KWESI-TELECOMMUNICATION
Ngesikhathi lapho ukuxhumana ngocingo kukhona yonke indawo, ukuqeqeshwa kokufakwa nokuLungiswa kweThuluzi Lokuxhumana ngocingo kunikeza abafundi bethu isilinganiso esikhulu sokubekwa kanye nomsebenzi ojabulisayo nobheka phambili. Esimweni sokufunda esivumelaniswa nezimo zasemsebenzini nokuhlanganisa ubuchwepheshe obusha, uhlelo lwethu luqeqesha ochwepheshe abaqeqeshiwe abaqeqeshiwe.
Isikhathi Esithathwa: Cishe izinyanga eziyi-16 kufaka phakathi amasonto ama-3 wokufunda (amahora angu-1800)
Izidingo zabahlinzeki bokusekelwa kwamakhompyutha ziphezulu kakhulu futhi imboni inikela ngemiholo yokuncintisana. Abasebenza ngokuxhaswa ngamakhompyutha basiza ekufakweni okuyisisekelo nasekusebenzeni kwemishini yekhompyutha.
Isikhathi Esithathwayo: Izinyanga eziyi-16 kufaka phakathi amasonto ayi-16 ama-internship (amahora ayi-1,800)
Abafundi ekwakhiweni kwezakhiwo banesithakazelo esikhulu ekwakhiweni kwezakhiwo. Abafuna ngokuphelele, banephrofayili ephelele yokwenza imisebenzi edinga ukunakwa okukhulu ngemininingwane. Uhlelo lwethu luhlose ukuqeqesha abasebenza kwezobuciko abasebenzisa isoftware yokudweba emaphethelweni entuthuko yezobuchwepheshe.
Isoftware esetshenzisiwe i-AutoCAD, Revit izakhiwo, Revit MEP kanye nesakhiwo seRevit. Abathweswe iziqu basebenza emikhakheni efana nobunjiniyela bezakhiwo, ezobunjiniyela, ezomakhenikha nokwakha.
Isikhathi sokuqeqeshwa: izinyanga eziyi-16 kufaka phakathi amasonto ama-4 wokufunda (amahora angu-1800)
Ukuhweba okuhlobene nokuqeqeshwa kwe-Industrial Design kuhloselwe labo abanomqondo onamandla wokubuka.
Iziqu zethu zisebenza emaqenjini e-multidisciplinary ngokubambisana nabaklami nonjiniyela. Baqashwa yizinkampani ezinkulu: amafemu wobunjiniyela, izinkampani zokwakha, abakhiqizi bemishini, njll.
Cishe izinyanga eziyi-16 kufaka phakathi amasonto ama-3 wokufunda (amahora angu-1800)
IMIYALO YOKUZIPHATHA KANYE NEZIMIZO ZOKUKHANYA
Lokhu kuhweba okuhlobene nokuqeqeshwa ku-Industrial Mechanics of Construction and Maintenance kwenzelwe labo abanomqondo oqinile futhi abafuna ukwazi ngemvelo.
Labafundi be-mechanics bezikhathi esizayo abasebenza emikhakheni ethuthukile njenge-pulp nephepha, ukucutshungulwa kokudla, izindwangu, ukwenziwa kwemishini yezimboni, njll.
Isikhathi Esithathwayo: Izinyanga eziyi-16 kufaka phakathi amasonto ama-3 wokufunda (amahora angu-1 800)
Ubungcweti obuhlobene nokuwelda nokuqeqeshwa komhlangano kuhloselwe labo abathanda umsebenzi wezandla futhi abanomqondo oqinile wobuchwepheshe. Uhlelo lwethu luqeqesha ochwepheshe abasebenza kakhulu esikoleni sefektri esisezingeni eliphezulu.
Iziqu zethu zisebenza kuma-SME kanye nezinkampani zamazwe omhlaba ezimotweni zezimoto, i-aeronautics, i-aerospace, izimayini neminye imikhakha.
Isikhathi Esikhona: Cishe izinyanga eziyi-16, kufaka phakathi amasonto ama-3 wokufunda (amahora angu-1,800)
UKUHLANGANYELWA KWESIFUNDO NOKUTHENGA KOMNYANGO
Amaphrofeshinali ahlobene nokwakhiwa kwezangaphakathi kanye nokuqeqeshwa kwezethulo ezibukwayo enzelwe izingqondo zokudala ezifisa ukubeka ithalente labo kwezobuciko ekusebenzeni kwabantu.
Kwisimo esivumelana nobuciko, othisha abaziwayo abasebenza emkhakheni wezobuciko besitimela wobuciko kanye nabasebenza ngethalente lokubuka. Iziqu zethu zisebenza endaweni evuselelayo futhi evela njalo yokusebenza. Ziyazisebenza noma zisebenza ezikhungweni zokuhlobisa, ezitolo ezithengisa izinkampani ezinkulu.
Ukuqeqeshwa kuthatha cishe izinyanga eziyi-16, kufaka phakathi amasonto ama-4 wokufunda (amahora angu-1,800).
Ukuze ungeniswe kulolu hlelo kumele:
Iba nediploma yesikole samabanga aphezulu
Uqede ngempumelelo i-BLI French Level 8
Yiba neminyaka eyi-18 okungenani
Ikhophi yepasipoti evumelekile
Ikhophi yesitifiketi sakho sokuzalwa ngesiNgisi noma ngesiFulentshi, esibhalwe phansi futhi sahunyushwa
Ikhophi yediploma yakho yesikole seHight kanye nemibhalo ebhalwe ngesiNgisi noma ngesiFulentshi, engaqondiswanga futhi ihunyushwe
Ikhophi yemvume yokufunda
Ubufakazi bezinga laseFrance (Izinga le-BLI noma ukuhlolwa okusemthethweni)
Ubufakazi besikhundla sezezimali
[ifomu lokuxhumana-7 404 "Ayitholakalanga"]
ISuite 400, 70 Rue Notre Dame Ouest
UMsombuluko - uLwesihlanu: 8:30 AM - 5 PM
Isivivinyo sokubekwa kwesiNgisi
Ukuhlolwa kokubekwa eFrance
Yibani umndeni osindayo
© 2020 BLi Canada. Wonke Amalungelo Agodliwe.